15 को 17 पूल सबै वर्ष दौर र गरम आउटडोर पूल पनि वर्षैभरि खुला जोडिएको छ ठूलो इन्डोर पूल को एक खुला. तरंग पूल र सर्फ पोखरी को वातावरण जगाउनुहोस् समुद्र तटीय बिदा. को सर्फ पूल विशाल छ! यसलाई आफ्नो बोर्ड संग साथै इन्डोर प्रयोगको लागि विकास विशेष बोर्डहरू संग प्रयोग गर्न सकिन्छ.
ताल Garda यसको शान्ति र सौहार्द लागि प्रसिद्ध हुन सक्छ, तर Caneva विश्व साँच्चै अप कुराहरू जनाए. को यो डबल whammy थिम पार्क एक चलचित्र र Acquapark बीच विभाजित छ.
तपाईंको Swimsuit प्याक र युरोप मा सर्वश्रेष्ठ पानी पार्कहरू फेला यात्रा मा जान तयार? बिल्ली हो! अझै राम्रो समाचार, तपाईं को सहायता संग सजिलै यी गन्तव्यहरू सबै प्राप्त गर्न सक्छन् SaveATrain ! कुनै लुकेका अतिरिक्त शुल्क संग, तपाईं भयानक सवारी र राम्रो समय मा खर्च गर्न थप हुनेछ! कि गर्मी छुट्टी बुक, अब!